SEO လုပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်မဲ့ ဘယ်လိုရလဒ်တွေရနိုင်မလဲ ? -
SEO (Search Engine Optimizing)ဟာဆိုရင် Business owner တွေရဲ့ Website တွေကို မြန်ဆန်ထိရောက်စေပြီး User Friendly ဖြစ်စေတဲ့အပြင် Search engine ပေါ်မှာလည်း Ranking မြင့်မားစွာရစေတဲ့ Website ဖြစ်ဖို့အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုတဲ့ Marketing နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Website ပေါ်ကိုအလားအလာရှိတဲ့ အရည်သွေးပြည့်တဲ့ Potential Customer တွေတိုးပွားလာစေတဲ့အပြင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာ Website Bounce Rate တွေပါပြောင်းလဲတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။
SEO ကရမဲ့ အဓိက ရလဒ် ၅ ခုကတော့
1.User Friendly Website ဖြစ်စေခြင်း
အပေါ်ကပြောခဲ့သလိုပါပဲ SEO ဟာ Business owner တွေရဲ့ Website တွေကိုပိုမိုမြန်ဆန်ချောမွေ့စေပြီး User Friendly ဖြစ်စေပါတယ်။တော်တော်များများက SEO ဆိုရင် Search Engine ပေါ်မှာ Optimizing ဖြစ်တာကိုပဲပြေးမြင်ပြီး ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ ယနေ့ခေတ်မှာ SEO ဟာ User experience ကိုပါတိုးပွားစေပါတယ်။Website တစ်ခုဟာ Structure ကောင်းကောင်းနဲ့တည်ဆောက်ထားမယ် အမြင်အားဖြင့်ရှင်းလင်းပြီး Uncluttered ဖြစ်တဲ့ Website မျိုးဟာဆိုရင် Causal visitor တွေ Website မှာကြာကြာနေအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုကနေ Pages view တော့တိုးတက်လာပေမဲ့ Website bounce rate ကတော့နိမ့်ဆင်းလာတတ်ပါတယ်။အလားတူပါပဲ သင့်ရဲ့ Website မှာရှိတဲ့ Content တွေ Blog article တွေ Sale post တွေဟာ Reader တွေ Viewer တွေကိုပျော်ရွှင်စေပြီး သူတို့ရှာချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဖတ်ချင်တဲ့အရာတွေ မေးချင်တဲ့အရာ စသဖြင့် စိတ်ဝင်စားမှုရရှိစေပြီး Website ပေါ်မှာဆွဲဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။ SEO အသုံးပြုထားတဲ့ Website စာမျက်နှာမှာဆိုရင်တော့ Search Engine ဟာလည်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ High quality information ကို User တွေကိုဖော်ပြပေးနိုင်မယ် User တွေဟာလည်းသိလိုတဲ့အရာတွေကို အလွယ်တကူသိနိုင်မယ် ဒါကြောင့် SEO ဟာ User Friendly ဖြစ်စေပါတယ်။
SEO-optimized website တွေဟာဆိုရင် Mobile နဲ့ Tablet အပါအဝင်အခြားသော Devices တွေမှာ Loading ပိုမိုမြန်စေတဲ့အပြင်ဖတ်ရှုအသုံးပြုရတာလည်းလွယ်ကူပြီး Properly Display လုပ်နိုင်ပါတယ်။Website တစ်ခုဟာ ဖတ်ရတာလွယ်ကူမယ် ဝင်ရောက်ရတာမြန်ဆန်မယ်ဆိုရင် Reader နဲ့ Visitor တွေရဲ့စိတ်အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်မှာအမှန်ပါပဲ။သင့်ရဲ့ Website အတွက် Loyal visitor,subscriber တွေရရှိစေပြီး သင့် Website ကိုထပ်မံပြန်လာချင်အောင်ဖမ်းစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအနေနှင့် တူညီတဲ့ အပြိုင် Business နှစ်ခုဟာ တူညီတဲ့ Product ကိုရောင်းချနေပြီး စျေးနှုန်းအနေနဲ့လည်းတူညီနေတယ်ဆိုပါစို့ ..အဲ့ဒီ Business နှစ်ခုမှာ တစ်ခုဟာ SEO optimized Website ရှိပြီးအခြားတစ်ခုဟာမရှိဘူးဆိုရင် ဘယ် Business ဟာပိုမိုပြီး Brand awareness ရရှိပြီး Customer တိုးတက်စေမယ်လို့ထင်ပါသလဲ ?? ဘယ် Website ဟာ Local customer တွေကိုပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ ? SEO အသုံးပြုထားတဲ့ Website ဟာ စျေးနှုန်းတူ Product ခြင်းတူနေရင်တောင် Customer ပိုမိုရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။
SEO ဟာတကယ်ကို Strong ဖြစ်တဲ့ Marketing နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။တကယ်လို့သင့်ရဲ့ အပြိုင် Business တွေဟာ SEO ကိုအသုံးပြုနေပြီး သင့် Website အတွက်အသုံးမချရသေးဘူးဆိုရင်တော့ အသုံးပြုကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေဗျာ။
Posted by Min Thuta/ စက်တင်ဘာ 29, 2020/ Blog/0Comment